Inkcazelo ngeinshorensi yohambo | UAirbnb
Ucinga ngokuthenga i-inshorensi yohambo? Nantsi inkcazelo ethile.
Xa uthenga ipolisi yeinshorensi yokuhamba, qwalasela izizathu eziqukiweyo kwakunye nemimiselo yepolisi, imiqathango neemeko ezingaqukwanga kuba iimeko eziqukwayo, izicwangciso nabanikezeli abafani. Qaphela ukuba ngokuqhelekileyo i-inshorensi yokuhamba ayisibhataleli "isiganeko esibonwe kwangaphambili"—okanye ekulindeleke ukuba senzeke—nokuba eso siganeko siqukiwe kwizizathu ezenza uyifanelekele i-inshorensi. Icoronavirus (COVID-19) inokuthathwa njengesiganeko esibonwe kwangaphambili kwaye isenokungamkelwa zii-inshorensi ezininzi zokuhamba.
UAirbnb unikezela ngale nkcazelo ngeenjongo zokukwazisa kuphela. Okwangoku uAirbnb akanayo i-inshorensi yohambo ibe akaxhasi nayiphi inkampani, iiarhente okanye abathengisi beinshorensi yohambo.
Ngaba uyayifuna i-inshorensi yohambo?
Abahambi basenokufuna ukuba neinshorensi yokuhamba. Izidingo zomntu zinokwahluka, kodwa ngokuqhelekileyo zibaninzi izibonelelo njengoko ucinga ngesicwangciso onokusikhetha.
Esi sibonelelo singenza ubonelwe xa ungakwazi ukuthatha uhambo lwakho ngenxa yezizathu ezikufaneleyo ukuba ubonelelwe ezifana nemozulu, ukuqhankqalaza kwabasebenzi, ukugula, ukwenzekala, okanye ukufa; okanye ezinye izinto eziphazamisayo ezinxulumene nomsebenzi.
Esi sibonelelo sinokwenza ubuyiselwe iindleko zakho xa kufuneka uphelise uhambo lwakho ungekalugqibi.
Esi sibonelelo sinokwenza zibuyiselwe indleko zakho zonyango xa uye wagula okanye wafumana ingozi ebudeni bohambo.
Iinkonzo zoncedo olungxamisekileyo
Esi sibonelelo singakuncedisa xa uhamba ngenxa yeemeko zikaxakeka njengothutho kwiimeko zongxamiseko, ukuhamba ngenxa yokugula, xa uthunyelwe kwabanye oogqirha, naxa ulahlekelwe okanye ubelwe iivisa neepaspoti.
I-inshorensi yempahla elahlekileyo okanye emoshakeleyo
Esi sibonelelo singenza ukuba ubonelelwe xa izinto zakho zilahlekile, zibiwe okanye zimoshakele ebudeni bohambo.
Rhoxa noba Kungesiphi Isizathu (CFAR)
Le nzuzo ingenza zibuyiselwe zonke iindleko zohambo lwakho okanye kubuyiselwe inxalenye yazo xa uthe warhoxa kuhambo lwakho ngenxa yezizathu ezithile.
Indawo yokuthenga i-inshorensi yokuhamba
Abameli beinshorensi yezohambo baqokelela zonke izicwangciso ezisuka kwiinkampani zeinshorensi yohambo ukuze ukwazi ukuzithelekisa uze ukhethe eyona enexabiso neemeko ezilungele wena.
Funda amagama abhalwe kancinci.
Ipolisi yakho iquka iinkcukacha ngezinto eziqukiweyo nezingaqukwanga. Ebudeni bohambo lwakho, qiniseka ukuba ipolisi yakho iyafumaneka ukwenzela xa kunokwenzeka into ze kufuneke ufake ibango.
Thenga kwindawo ekufutshane.
Zisenokuba ninzi izinto onokukhetha kuzo, ngoko qiniseka ukuba uyazithelekisa ezi zibonelelo namaxabiso azo.
Yiqwalasele kakuhle ipolisi yakho uze ubuze nemibuzo.
Ukuba unemibuzo emva kokuba uhlole iimeko ezibhatalelwayo, imimiselo, imiqathango, neemeko ezingabhatalelwayo, qhakamshelana nomnikezeli nkonzo.
Hlola iimeko zakho eziqukiweyo.
Amanye amakhadi ebhanki anezicwangciso zeinshorensi yohambo nezibonelelo, ezifana nokuqukwa kwemoto eqeshwayo. Ezinye iipolisi zabanikazi bezindlu zisenokwenza babonelelwe xa ubelwe okanye ulahlekelwe zizinto ngexesha abangekhoyo ekhaya ngalo. Nawe usenokubonelelwa ngenxa yomqeshi wakho.
Ngaba i-inshorensi yohambo iyakubonelela ngamabango anxulumene ne-COVID-19?
Qiniseka ukuba uyayiqonda imimiselo nemiqathango yesicwangciso osithengayo. Iimeko ezaziwayo okanye ebezilindelekile njengokuvela kwenovel coronavirus (COVID-19) nezinye izinto ezaziwayo zidla ngokungaqukwa kwiipolisi ezininzi ibe zisenokungabhatalelwa.
Ukuba uthenge i-inshorensi ngaphambi kokuvela kwenovel coronavirus (COVID-19), sicebisa ukuba uyiqwalasele kakuhle ipolisi yakho. Amabango enovel coronavirus (COVID-19) abhatalelwayo yi-inshorensi alinganiselwe. Ngokomzekelo, usenokubhatalwa ukuba uyagula okanye uvalelwe wedwa, kodwa ungabhatalwa xa urhoxisa uhambo lwakho kuba usoyika le ntsholongwane.
Ngaba kufuneka ndithenge i-inshorensi yohambo?
Izicwangciso zeinshorensi yohambo zikunika izibonelelo ezininzi ezisenokuquka ukubonelelwa ngemali engabuyiswayo xa uhambo lurhoxiswa ngenxa yeemeko zequbuliso, ukuphazamiseka okanye ukulibaziseka, ukubonelwa ngeendleko zonyango, iinkonzo zokuncedwa kwiimeko zongxamiseko, ukubhatalelwa kwempahla elahlekileyo okanye ebiweyo, ukubelwa izinto zakho ngoxa ukuhambo, nezinye ezingakumbi. I-inshorensi yohambo iyafumaneka xa uyithenga nangona zingafani izinto eziqukayo, izicwangciso nabanikezeli bayo.
Yintoni umahluko phakathi kwepolisi yaxa uhambo luphazamisekile nepolisi yaxa urhoxa kuhambo?
I-inshorensi yaxa kuphazamiseke uhambo isenokubonelela xa kufuneka uhambo lwakho luphazamisekile ngenxa yemeko ekufanelayo ukubonelelwa. I-inshorensi yaxa urhoxa kuhambo isenokubonelela xa kufuneka urhorise uhambo ngenxa yemeko ekufanelayo ukubonelelwa.
Ngaba ndinayo i-inshorensi yohambo kwikhadi lam lebhanki?
Amanye amakhadi ebhanki asenokukunika ukhuseleko oluthile xa uneinshorensi yohambo okanye ukwiinkqubo zaxa urhoxa kuhambo. Iinkqubo ziyahluka ngokwezinto eziqukiweyo, ezingaqukwanga nemiqathango.
Iinkqubo zamakhadi ebhanki zisenokunika: Ukhuseleko lweemoto eziqeshwayo (kuquka iimali ozibhatala xa imoto imoshakele) -Impahla elahlekileyo okanye emoshakeleyo -I-inshorensi yokusweleka ngengozi yemoto okanye eyepleyin -Uncedo kwiimeko zongxamiseko neengenelo zokuncediswa ekubhukeni indawo
Sicebisa ukuba uphinde ujonge iingenelo ezikwikhadi lakho lebhanki kuquka neengenelo zokhuseleko ozifumana ngenxa yokuba ulilungu.